हिमाल खबरपत्रिका | ‘लाहुरको कमाइ’ मा कालो बादल
‘लाहुरको कमाइ’ मा कालो बादल
रेमिटेन्सको टेकोमा चलेको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी कोरोना प्रकोपले धर्मराउने संकेतसँगै प्रतिस्थापनको नयाँ बाटो खोज्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ।
‘लाहुरको कमाइ’ ले दुई दशक नेपाली अर्थतन्त्रको सेवा गर्‍यो । देशको ढुकुटीमा विदेशी धन भरिदियो । देशभित्रको रोजगारीको हाहाकार थेगेर गरीब परिवारका हातमा नगद पुर्‍यायो । बजारलाई चलायमान बनाएको अर्थतन्त्रको यो टेको कोरोना भाइरस संक्रमणको चपेटामा हल्लिएको छ । कोरोना प्रकोपअघि नै माघसम्ममा रेमिटेन्स ०.५ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसयताको धक्का फागुन र चैतका तथ्याङ्कमा देखिन बाँकी छ ।
रेमिटेन्स धर्मराउँदा राज्यको ढुकुटी र गरीबको भान्सा दुवैलाई सङ्कट पर्छ । हजारौं परिवारलाई गरीबीतिरै धकेल्छ, बजार सुस्त बनाउँछ र देशको अर्थ–व्यवस्थालाई हायलकायल पार्छ । ‘लाहुर’ मा कामधन्दा खोसिएपछि बेरोजगारी बढ्छ । अहिले त्यही दुरवस्था आउने चिन्ता शुरू भएको छ । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा रेमिटेन्समा अत्यधिक भर पर्नु नै जोखिम भएको बताउँछन् । “पूर्णताको अन्तिम विन्दु (स्याचुरेसन) मा पुगिसकेको रेमिटेन्सको विकल्प खोज्न अब ढिला गर्नुहुँदैन”, उनी भन्छन् ।
रोजगारी खोसिने भय
सरकारले २९ फागुनदेखि अनिश्चितकालका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि दिइने श्रम स्वीकृति स्थगित गरेको छ । जसका कारण उड्न तम्तयार सात हजार र प्रक्रियामा भएका करीब ४५ हजारको वैदेशिक रोजगारीको ढोका तत्कालका लागि बन्द भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरे बताउँछन् । नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य खाडी देशहरू र मलेशियाले यात्रा प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रण गरेका छन् । यो अवस्था कहिलेसम्म लम्बिन्छ निश्चित छैन । अध्यक्ष गैरेका अनुसार, सङ्कट लम्बिए रोजगारदाताले तलब रोक्ने मात्र नभई कामदार समेत कटौती गर्नेछन् । त्यसैले यो सङ्कटको असर लामो समय पर्न सक्छ । खाडी मुलुकको प्रमुख आम्दानी कच्चा तेलको व्यापार हो । सरकारी बजेटको ८५–९० प्रतिशतसम्म रकम तेलको निर्यातबाट आउँछ । कोरोना संक्रमणको प्रभावले विश्वव्यापी माग घटेपछि गत साता कच्चा तेलको मूल्य सन् २००३ पछिकै न्यून विन्दुमा ओर्लियो । जसका कारण खाडी देशहरूको अर्थतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिएको छ । ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशमा पनि आर्थिक मन्दी शुरू भएको प्रक्षेपण गरिएकाले तेलको माग लामै समय नबढ्ने आशङ्का छ । त्यसैले ती देशमा गहिरो आर्थिक धक्का पर्ने अनुमान छ ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो अध्ययनले कच्चा तेलको मूल्य घट्दा पेट्रोलियम निर्यातमा निर्भर खाडी देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएर त्यसको प्रभाव नेपाल भित्रिने रेमिटेन्समा पर्ने देखाएको थियो । नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य कतारमा यसै पनि नेपाली कामदारको माग लगातार घटिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महीना (माघ) सम्ममा कतारमा जाने कामदार गएको वर्षको तुलनामा ४४ प्रतिशतले घटे । अर्को श्रम गन्तव्य कुवेतमा १६.८ प्रतिशतले घटेको छ ।
एक महीना मात्रै रेमिटेन्स रोकिए करीब रु.६६ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा देश भित्रिन पाउँदैन । यसो हुँदा देशको शोधनान्तर स्थिति नकारात्मक हुनसक्छ । माघसम्ममा शोधनान्तर स्थिति रु.२१ अर्ब ६१ करोड बचतमा छ ।
त्योभन्दा पनि डरलाग्दो चाहिं, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा धक्का पुग्छ । माघसम्ममा रु.१० खर्ब ९७ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । अहिले देशको झ्ण्डै रु.१ खर्बभन्दा बढीको मासिक व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्ने उपाय नै रेमिटेन्स हो । रेमिटेन्स घट्नेबित्तिकै यो सन्तुलन त बिग्रिन्छ नै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढेर जोखिम निम्तिन सक्छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुमेमा नेपाली युवालाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेका छन् । तर, खाडी क्षेत्रमा सङ्कट आए त्यहाँका १५ लाखभन्दा धेरै कामदारलाई नेपाल ल्याएर काम दिने विकल्प छैन । त्यसमाथि, हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने हजारौं युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व छँदैछ ।
अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर छिट्टै नसकिए रोजगारी गुमाएका हजारौं नेपालीको भान्सा प्रभावित हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा झार उखेल्ने कार्यक्रमले दिगो र उत्पादनमूलक रोजगारीको विकल्प सिर्जना गर्दैन । दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।”
राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा ‘रेमिटेन्स मोड’ मा चलेको देशको अर्थतन्त्रलाई ‘उत्पादनशील मोड’ मा लैजानुपर्ने बताउँछन् । “रेमिटेन्सको भरलाई प्रतिस्थापन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रबारे गम्भीर भएर सोच्ने र व्यवस्थापन गर्ने चुनौती आएको छ”, थापा भन्छन् ।
जनविश्वास जगाउने वेलारामु सापकोटा र राजु बास्कोटा